Uxolo 98 m2 apt (amagumbi ama-4) kunye ne-terrace enkulu
Indawo ebanzi enamagumbi ama-98 square metres endlwini, kwindawo ezolileyo yaseMaribor. Ilungele izibini, iintsapho kunye nabahambi abafika ngemoto, kodwa kufutshane nedolophu ye-BUS line kunye noqhagamshelo kumbindi kunye nePohorje. Ukupaka kusimahla kwaye kukhuselekile kwiyadi yangasemva kwaye i-wi-fi iyafumaneka.
I-Apartment ikumgangatho wokuqala, ifikeleleka ngezinyuko.
Kukho iibhedi ezi-5 ezikhoyo
- ibhedi ephindwe kabini kwigumbi lokulala
- ibhedi eyodwa kunye nebhedi yomntwana (ukuya kwiminyaka eyi-10 ubudala) kwigumbi lesibini
- ibhedi eyodwa
-Isofa engasetyenziselwa ukulala (umntu o-1) kwigumbi lokuhlala
Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo, linesitovu kunye nesipheki, izinto zokucheba, iipleyiti kunye neekomityi. Igumbi lokuhlala line-air-conditioning kwaye liyakwazi ukupholisa namanye amagumbi.
Kukho i-terrace yangasese, efumaneka kwigumbi lokulala, ngokujonga intaba yasePohorje, apho uya kukwazi ukuphumla. Indlu ijikelezwe yigadi enkulu eluhlaza :)
Indawo yokuhlala ezolileyo nekhuselekileyo yaseMaribor, ifikeleleka lula ngemoto okanye ngezithuthi zikawonke-wonke. Iivenkile ezinkulu ezi-6 kumgama wokuhamba (imizuzu emi-5 ukuhamba) kwaye njengoko iMaribor isisixeko esincinci, unokuhamba uye embindini. Iziko lokuthenga i-Europark iyafikeleleka ngemizuzu engama-20 kunye neziko lesixeko ngemizuzu engama-30 (ukuhamba), ngelixa isikhululo sebhasi esikusa esixekweni sikufutshane.
Uya kuqhagamshelana nathi kakhulu (okanye kancinci) njengoko uthanda - siyafumaneka kule flethi ingezantsi.